ဒုက္ခသည်စခန်းသို့ဝင်ရောက်၍ ပါလက်စတိုင်း ၂ ဦးကို အစ္စရေး ပစ်သတ် | Danya Wadi
Browsing: » Home »သတင်းများ»ဒုက္ခသည်စခန်းသို့ဝင်ရောက်၍ ပါလက်စတိုင်း ၂ ဦးကို အစ္စရေး ပစ်သတ်	Leaveacomment
ဒုက္ခသည်စခန်းသို့ဝင်ရောက်၍ ပါလက်စတိုင်း ၂ ဦးကို အစ္စရေး ပစ်သတ်	Posted by danyawadi on November 17, 2015 in သတင်းများ	နိုဝင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၅
– ပါလက်စတိုင်းပိုင် အနောက်ဘက်ကမ်းရှိ ကွာလန် ဒီယာ ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ယမန်နေ့မနက် အာရုဏ်တက် အချိန်က ပါလက်စတိုင်းနှစ်ဦးကို အစ္စရေး လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ များက ပစ်သတ်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
သေဆုံးသွားသူများမှာ အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ် အဟ်မဒ် အဘူ အလ်-အီရ်ှနှင့် ၂၁ နှစ်အရွယ် လာအစ် မာနာဆရာ တို့ ဖြစ်ကြပြီး ထိုပစ်ခတ်မှုအတွက် အခြားတစ်ဦးလည်း ဒဏ်ရာရရှိကာ စိုးရိမ်ရသည့် အခြေအနေတွင် ရှိနေ သည်ဟု ဆိုသည်။
ဂျေရုစလင်မြောက်ပိုင်းရှိ အဆိုပါဒုက္ခသည်စခန်းသို့ ရာနှင့်ချီသော အစ္စရေးစစ်သားများနှင့် အထူးတပ် ဖွဲ့ ၀င်များမှာ ၀င်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီး အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်မှု များလည်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့များမှာ ဇူလိုင် လ က ပါလက်စတိုင်းပိုင်နက်အတွင်းရှိ တရားမ၀င် ခြေချအိမ်ယာတွင် နေထိုင်သည့် ဂျူးတစ်ဦးကို ပစ်ခတ် မှုကြောင့် လက်ရှိအတွင် ဖမ်ဆီးခံထားရသည့် မိုဟာမက် အဘူ ရှာဟင်၏ နေအိမ်ကိုလည်း ဖြိုချဖျက်ဆီးခဲ့သည်။
ဖာတာအဖွဲ့ကို သစ္စာခံသော အလ်-အက်ဆွာ အာဇာနည် တပ်ဖွဲ့နှင့် ဒုက္ခည်စခန်းကို ၀င်ရောက်စီး နင်းသည့် အစ္စရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များအကြား ပစ်ခတ်မှုများမှာ ၁ နာရီခန့် ကြာမြင့်ခဲ့သည်။ အစ္စရေး သတင်းရင်းမြစ်များ ကမူ ၎င်းတို့၏ စစ်သားတစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။
အဘူရှာဟင်၏ နေအိမ်အား ဖြိုချရန် အစ္စရေးစစ်တပ်က ပြီးခဲ့သည့်သီတင်းပတ်များအတွင်း ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း ကွာလန်ဒီယာ ဒုက္ခသည်စခန်းမှ ဒေသခံများက ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြမှုခဲ့ကြောင့် မဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပေ။
ယခုအချိန်တွင် ဆာဟင်၏ မိသားစုများကို နေအိမ်မှာ အတင်းမောင်းထုတ်ကာ နေအိမ်အား ဖောက်ခွဲ ဖျက်ဆီး ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုဖောက်ခွဲမှုကြောင့် အနီးရှိ နေအိမ်များတွင်လည်း ဆိုးဆိုးရွားရွား ပျက်ဆီးမှုများ ရှိခဲ့သည်။
အစ္စရေး၏ ထိုကဲ့သို့ စီးနင်းဝင်ရောက်မှုအတွင်း ပါလက် စတိုင်းလူငယ်မျာမှာ ဒုက္ခသည်စခန်းမှထွက်ကာ ဆန္ဒပြ၍ ကျောက်ခဲဖြင့် ပစ်ပေါက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အစ္စရေး တပ်ဖွဲ့ များက ပြန်လည် ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။
← တိုက်ခိုက်မှုများ ပိုလုပ်မည်ဟု အိုက်အက်စ် ခြိမ်းခြောက်သည့်ရုပ်သံ ထွက်ပေါ်	ချစ်တင်းနှောနေစဉ် ယောကျာ်းကိုလိမ့်ချမိ၍ လိင်တံ မတော်တဆကျိုးသွား →
Popular Posts	လူနည်း စု၏ဆန္ဒကို လျစ်လျူရှုထား၍ မရ ဟု နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးထင်ကျော် က ဆို	GTC ကျောင်းသား/သူနှစ်ဦး၏ဗီဒီယိုဖိုင်	ဓည၀တီဆိုဒ်သို့မှန်ကန်သော သတင်း၊ ဆောင်း ပါး၊ ဓါတ် ပုံ များ ပေး ပို့ လို ပါ က danyawadi9@gmail.com နဲ့ ဆက် သွယ် ပါ ။ . . . If you want to post any real documents such as , History,Articles , photos and News ,Contact here.	ဆယ်တန်းကျောင်းသူလေးကိုစစ်ဗိုလ်ကြီးကအဓမ္မ ကျင့် ပါ တယ် ဆို တဲ့ ကိစ္စ အ တွက် ဆယ် တန်း ကျောင်း သူလေး ယွန်းသော် တာမြတ်နိုး ရဲ့ တောင်း ပန် စာ...	သံလျှင် GTC ကစုံတွဲ၏လုပ်ရပ်	THIT HTOO LWIN Movies, Videos, VCD, Latest	အိုဘားမားကဦးသိန်းစိန်နှင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ထံ ဖုန်းဖြင့် ဆက် သွယ် ဆွေးနွေး	Myanmar Love Stories eBooks	နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးကို ၀င်မစွက် ဖက် ရ ဟူ သည့် အာဆီယံ ပဋိညာဉ်ကို မလေးရှား အစိုးရ လိုက်နာရန် မြန်မာ အစိုးရပြော	ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း	Recent Posts	ရခိုင်ကိစ္စမှာ ပြည်တွင်းရေး မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံ တကာ ပြဿနာ ဟု မလေးရှားပြောကြား
Total guests visited လာဖတ်သည့် ဧည့်သည်ပေါင်း 3,914,913 ဦး